Fandalinana ny Boky « 2 Samoela » – FJKM
Fandalinana ny Boky « 2 Samoela »
2 Samoela 4-5
Miha-miorina ny fanjakan’i Davida .
1-Tsy amin’ny alalan’ny fandatsahan-drà izany .
Nampiraviravy tànana ny mpomba ny taranak’i Saoly ny fahafatesan’i Abnera . Namily ny hevitry ny sasany izany ka novonoiny i Isboseta. Tsy nanorina ny fanjakany tamin’ny fanadatsahan-drà anefa i Davida , ilay natoky ny fitondran’ Andriamanitra.
2-Amin’ny fankatoavana. Ireo foko 10 sisa no mba taranak’i Saoly no tonga tao Hebrona . Neken’ireo ny maha- mpanjaka avy amin’i Jehovah an’i Davida. Koa nanao fanekena taminy izy ka nankato azy. Toy izany koa ny firenena avy any ivelany toa an’i Tyro, nandefa teknisiana hanorin-dapa ho an’i Davida.
3-Amin’ny fananana renivohitra vaovao .
I Jerosalema no mety satria tanana anelanelany io ara- jeografia raha oharina amin’ny fanjakan’i Davida sy i Isboseta . Sady tànana tsy miandany koa io noho izy an’ny Jebosita fa tsy an’i Davida no tsy an’i Isboseta .
Niteraka maro teto izy ary i Solomona naterany teto no nandimby azy, fa tsy ireo tany Hebrona .
5-Amin’ny fandresena . Resiny noho ny fihainoana ny toromariky ny Tompo ny Filistina sy ny sampiny. Ireny no fahavalo akaiky indrindra azy ka ny fandreseny ireo dia midika ho fizorany ho amin’ny fiorenana ara-panjakana .